Safiirka Mareykanka oo la kulmay madaxweynaha Jubbaland | Somali Link Newspaper
Guriga Breaking News Safiirka Mareykanka oo la kulmay madaxweynaha Jubbaland
Safiirka Mareykanka oo la kulmay madaxweynaha Jubbaland
Khamiis, Maarso, 11, 2021 (HOL) – Safiirka Dowladda Mareykanka Donald Yamamoto ayaa hoyga uu degan yahay ku booqday madaxweynaha dowlad gobolleedka Jubbaland oo labadii cisho ee la soo dhaafay ku sugnaa magaalada Muqdisho.
Ilo xog ogaal ah oo ku dhaw dhaw kulanka ayaa sheegaya in labada dhinac ka wada hadleen shirka dhawaan u furmaya madaxda Dowladda Federaalka, Dowlad gobolleedyada iyo waliba gobolka Banaadir ee looga wada hadlayo arrimaha Doorashooyinka.
Bulshada caalamka ayaa cadaadis ku saareysa dhinacyada Soomaalida in ay ka heshiiyaan khilaafka ka taagan doorashada madaama uu dhamaaday muddo xileedka dowladda hadda jirta.
Shirka ayaa lagu wadaa in uu ka dhaco Teendhada Afsiyooni oo afar sano ka hor lagu doortay madaxweynaha xiligan talada haya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Article horeMadaxweyne Farmaajo oo ku dhawaaqay maalmo baroordiiq Qaran ah kaddib geeridii Cali Mahdi
Article soo socdaMaamulka gobolka Banaadir oo ku dhawaaqay in ganaax iyo ciqaab lagu rididoono qofkii aan soo xiran Facemask